Wenza izimanga kweyogandaganda
UNksz Lerato Baloyi okunguyena kuphela owesifazane oyi-Agricultural Equipment Technician eqashwe enkampanini yogandaganda, iJohn Deere eme eduze komunye wogandaganda asebenza ngabo. Isithombe: Sigciniwe
PHILI MJOLI | January 9, 2020
KUNZIMA ukushintsha indlela amakhasimende acabanga ngayo mayelana nokuthi yini umuntu wesifazane angakwazi ukuyenza nangeke akwazi ukuyenza uma enza umsebenzi okujwayeleke ukuthi wenziwa ngamadoda, ukwenza kahle umsebenzi wakho yikho okwenza ukuthi nawe wethenjwe.
Lokhu kushiwo wuNksz Lerato Baloyi (29) okunguyena kuphela owesifazane oyi-Agricultural Equipment Technician enkampanini yogandaganda, ekhiqiza , iphinde ikhande ogandaganda iJohn Deere, eSub Saharan Africa.
Umsebenzi wakhe kule nkampani wukulungisa ogandaganda abafile, ukuhlola ukuthi konke kusahamba kahle yini kubo, ukubheka inkinga eholele ekutheni ugandaganda ufe, wukulungisa iziqandisi esikhungweni esidayisa izinto zokutshala kule nkampani nokuhlela ukuthi ugandaganda kumele ube ngowokulima, owokutshala noma owokuvuna ngokufaka amathuluzi afanele.
Uthe ukuba kulo mkhakha kuhlanganisa nokufundisa amakhasimende ukuthi ugandaganda usebenza kanjani nokukhuluma nawo amakhasimende athole ukuthi adinga ugandaganda okwazi ukwenzani ukuze kukhule isivuno sawo.
“Kulo mkhakha abantu besifazane abekho. Amakhasimende uma ebona umuntu wesifazane abuza imibuzo eminingi efuna ukubona ukuthi uyayazi yini into oyenzayo.
“Okumele ukwenze wukuthi uzijwayeze ukufunda wazi konke ngomkhakha okuwo ungalokhu uzikhathaza ngokuthi amakhasimende awakwamukeli kahle, uma esebona ukuthi uyayazi into oyenzayo azoqala akuhloniphe,” kusho yena.
Uthe ngesikhathi enza uGrade 10 ePretoria Technical High ubevele esezazi ukuthi ufuna ukungena emkhakheni wezobunjiniyela kodwa kwaGrade12 akaziphasanga kahle izibalo okumenze ukuthi angakwazi ukuya enyuvesi, wangena ohlelweni lokuthuthukisa iMaths eWits Star School.
Ubhalise iMechanical Engineering eTshwane South TVET ngo-2008, ngaphambi kokuthi aphothule isitifiketi sakhe sikaN6 wafuna uqeqesho msebenzi.
Ngo-2012 wathathwa yile nkampani yogandaganda yamfaka ohlelweni lwayo lokuthuthukisa amakhono lweminyaka emine olwaludinga umuntu onoN2 noma uN3.
“Ngo-2015 ngithole isitifiketi sokuba yiTractor Technician, ngaqeqeshelwa lo msebenzi ophikweni olwenza lo msebenzi khona ngaphakathi ngathola umsebenzi.
“Ngemuva kwalokho nganikezwa ithuba lokuthi ngifunde umsebenzi kwimenenja ebhekela ukusiza amakhasimende,” echaza.
“Ukusebenza kulo mkhakha kusho ukugibela phezulu kugandaganda, ukuqukula izinsimbi ezisindayo ezifakwa kuwo ugandaganda nokuma isikhathi eside.
“Akujwayelekile ukuthi kube nomuntu wesifazane owenza lokhu mhlawumbe yingakho amakhasimende ayengabaza ukuthi ngiyakwazi ukwenza umsebenzi ngendlela efanayo nozakwethu besilisa,” kusho yena.
Uthe uyayithanda imishini, njengamanje imishini eminingi isisebenzisa ubuchwepheshe okwenza ukuthi awuthande kakhulu umsebenzi wakhe. Usebenza ngogandaganda, acubungule injini nokunye.
“Amakhasimende amaningi athanda ukuthenga imishini emikhulu esebenza ngokushesha, engagqilazi nekwazi ukwenza izinto eziningi lokhu kwenza umsebenzi wethu ube nzima, yingakho kubalulekile ukuthi sifunde ukusombulula izinkinga ngobuchwepheshe,” kusho yena.